China Medium brown BK104 / Medium brown BK103 mveliso kunye nabenzi | IBaizan
Umdaka ophakathi BK104 / Umdaka ophakathi BK103
I-Pvb ephakathi yeBrown
Umbala we-Baizan we-pvb wefilimu yeglasi elungisiweyo.
I-Baizan inokubonelela ngemibala emininzi yefilimu kubathengi abakhetha ngombala ozinzileyo kunye nechanekileyo.
umthamo wemveliso> 12000t ngonyaka
Ixesha lokuzisa: 5-15kwiintsuku
Ukuqinisekisa umgangatho weemveliso, senza uhlolo olungqongqo kwizinto zokwenza izinto, ngokwemigangatho yelizwe lase China.
Ukufumanisa i-resin ye-PVB powder
iprojekthi eguqukayo viscosity osity 20 ℃ 10% / S） Ubuninzi bokupakisha (g / ㎝3） Isalathiso sokunyibilika elt 120 ℃ 21.6kg g / 10min) Isidanga senkungu （%） Ukuhambisa ukukhanya （%） Ixabiso le-asidi （mgKOH / g) Umxholo hydroxyl t Wt%） Umxholo weqela leButyl t Wt%） elubala
Isampulu: emva kwayo yonke into eluhlaza ifike kumzi-mveliso, malunga neesampulu ze-5kg ziya kuthathwa kwilitha nganye.
Uvavanyo lwe-2.Appearance: mhlophe, intle kwaye ayikhululekanga nakuphi na ukungcola, umgubo ohamba ngokukhululekileyo okanye isuntswana.
3.Ukukhanya: thatha i-2kg yesampulu, yongeza i-1kg yeplastizerizer, xuba kakuhle, ukhuphe kwaye ubumbe inwebu, thelekisa umbala
4.Ukunyanzeleka: Nika ubunzima isampuli nge-analytical balance uze uyibeke kwibhotile enobunzima. Gcina ibhotile ehovini iiyure ezi-3, kunye nobushushu obungama-60 ℃ （± 1 ℃）. Emva kokuyikhupha, yibeke kwindawo eyomileyo imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 emva koko uyilinganise.
5.Viscosity: Yongeza i-resin powder kwi-funnel yamaphepha, faka ityhubhu yokugcoba kwi-65 bath yokuhlambela amanzi nge-1h, kwaye xa ikhutshwe kwaye ipholile kubushushu obungama-20 ℃ ± 1, galela isampuli kwikomityi yesikali , kwaye urekhode ixesha elahlileyo kwisisombululo ukufikelela kwi-50ml, eyi-viscosity yesampulu
Isalathiso se-Melt: Linganisa i-powder kunye ne-plasticizer (1: 3), ukongeza i-plasticizer kuqala kunye ne-powder kamva. Emva kokudibanisa kwisilinganiselo sokunyibilika kwesantya sokuhamba kwemitha, preheat imizuzu emi-4, yongeza ubunzima be-21.6g kwaye uqalise ukukhupha. Emva kwemizuzu emi-3, sika icandelo lokuqala, ulinde imizuzu emi-5 ngaphambi kokusika icandelo lesibini. Ubunzima obupheleleyo bamacandelo amabini buya kuba lixabiso lesalathiso sokunyibilika.
Egqithileyo Ukukhanya okumhlophe M104 / Milky emhlophe M102 / Opaque emhlophe M101
Okulandelayo: Bomvu R101 / Rose ebomvu R108
Luhlaza okwesibhakabhaka kwiC101 ecacileyo
pvb ecacileyo yemoto
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka BD102